Madaxweyne Biixi oo gaaray Boorame | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Madaxweyne Biixi oo gaaray Boorame
Madaxweyne Biixi oo gaaray Boorame
Madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wefdi ballaaran oo uu hoggaaminayo oo hawlo shaqo ugu baxay gobollada Galbeedka dalka, ayaa si diiran loogu soo dhaweeyey magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal.
Shacabka ku dhaqan magaalooyinka Dilla, Tulli, Goroyo-cawl iyo Boorama, ayaa madaxweynaha iyo weftigiisa u soo dhaweeyey, waxana iyagoo lulaya caleemo qoyan iyo calanka Somaliland ay madaxweynaha iyo weftigiisa ku qaabileen dariiqyada kala duwan ee magaalooyinkaas.
Sidoo kale, markii uu madaxweynuhu gaaray magaalada Boorama, waxa uu xarigga ka jaray Buundada weyn ee isku xirta Jaamacadda Cammuud iyo magaalada Boorama oo uu hore madaxweynuhu u dhagax dhigay.
Hormuudka Jaamacadda, xubno kamid ah golaha wasiirrada iyo Injineerrada gacanta ku hayey Buundada Cammuud oo madasha hadallo kooban ka jeediyey, ayaa madaxweynaha uga mahad celiyey sida xilkasnimada leh ee uu ugu guntaday inay buundadaasi dhammaato, waxana ay hoosta ka xarriiqeen inay dhismaheeda uu fududeeyey isku socodkii ardayda ee Jaamacadda iyo magaalada oo markii hore dhib badani ka taagnaa wakhtiyada roobabka Dooxo halkaas ku taalla awgeed.
Previous articleQarax xalay mar kale ka dhacay magaalada Bayruut
Next articleMaxakamada Soomaaliland oo Xabsi xulus ku Riday Rag Pank ku sameysay Nin Taksiilaa